Mpempe ike & mpụga Idị M - Mgbasa mgbasa ozi maka mmanụ dị Mkpa | AromaEasy
A na-ejikarị ụdị I na Australia, New Zealand, Papua New Guinea, China na Argentina. (Pịa Ebe a maka ndepụta zuru oke nke mba niile na-eji ụdị I)
Ihe nkwụnye 10 a nwere ihe nkedo okpukpu abụọ nke 1.6 mm, setịpụrụ na 30 Celsius na vetikal, na-akpụ Vidiyo agbagoro agbago nke 13.7 mm ma akụkụ abụọ ahụ tụrụ 17.3 mm n'ogologo na 6.3 mm n'obosara. Ọkpụkpụ ụwa dị larịị na-agakwa 6.3 site na 1.6 mm, mana ọ dị ogologo 20mm. Oghere dị n'etiti etiti ntinye mkpị na etiti plọg ahụ bụ 10.3 mm. Enwere ụdị plọg a na-enweghị okirikiri, yana naanị abụọ nwere ụdị V dị larịị. Plugdị nkwakọ abụọ a nwere paịlị na-anọchi anya na nke na-anọpụ iche, yabụ ọ bụrụgaghị etinyere plọg ahụ n'ime oghere, imetụ akụkụ ndị ahụ gosipụtara anaghị enye gị ụjọ.
Nkwunye plọg / soket dị na 15 amps dịkwa, ma ntụtụ ala dị obosara: 8 mm kama 6.3 mm. Ọkọlọtọ 10 amp ga-adaba na mgbapụta amị 15, mana plọg amị 15 ga-dabara oghere pụrụ iche 15 a. Enwekwara nkwunye amp amp 20 nke ntunye ya dicha obosara. Ihe nkwunye dị obere ga-adaba na mgbapụta amperage dị elu ma ọ bụghị nke ọzọ. A na-edobe usoro plọg / soket nke Australia dị ka ọkọlọtọ AS 3112. Ọ bụ ezie na enwere obere ọdịiche (paipu plọg ndị China dị 1 mm ogologo ma tinye eriri kọntaktị ya na ụwa na-eche ihu), ndị nkwụnye ahụ Australia na-eji sọks eji. Ndị mmadụ Republic of China (Chile China).
Ihe kpatara ihe kpatara ụdị Australia ji dị m mma yiri na ụdị A bụ n'ihi na ọkọlọtọ Australias bụ ụdị sọks ndị America oge ochie. Edebere ya na 1916 site na Harvey Hubbell II, otu injinia nke meputara ụdị A plọg. Ihe atụ nke okpukpu atọ nke Hubbell gosipụtagobeghi ihe ọfụma na US n'ihi enweghị ike na ihe dị adị ụdị A nkwụnye, mana enwere ihu ọma na Australia karịa ndị Britain ụdị D Ọ dị mfe n'ihi na ndị na-emepụta ime obodo ka m ga-eji plọg plọg kama itinye ya gburugburu. N'afọ ndị 1930, ndị Australia kacha emepụta ngwa elele eletrik, ya na State Electricity Commission of Victoria, kpebiri ihazi ogo ahụ.
Plọgị ike na mpụga Typedị J